Phandeeyar CivicTech Page 2
Posts Categorized: CivicTech
CIVIL SOCIETY AND TECH COMMUNITY DESIGN NEW CIVIC TECH SOLUTIONS FOR MYANMAR
Posted March 26, 2017 by by Thet Aung
47 representatives from Civil Society and the Tech Community came together as part of Innovation Marketplace –aCivic Tech competition – this Thursday, 16th and Friday, 17th March at… Read more »
Phandeeyar team visited Yangon Chief Minister
Posted February 9, 2017 by by Aung Win Htut
Phandeeyar team visited Yangon Chief Minister U Phyo Min Thein last Monday. We talked aboutapossible collaboration between Yangon government and the tech community inafew weeks’ time…… Read more »
Win up to USD 40,000 to kick start your civic tech project
Posted February 6, 2017 by by Aung Win Htut
Myanmar and English versions below: သင့်တွင်ရှိသော Civic Tech စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက် ရန်ပုံငွေရယူလိုက်ပါ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ အထိရယူနိုင်ဘို့ Innovation Marketplace မှာယခုပင် လျှောက်ထားလိုက်ပါ နည်းပညာကို အသုံးချပြီး အများပြည်သူဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လူအများလက်လှမ်းမီလာအောင် လုပ်ပေးချင်ပါသလား၊ လူထုနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မှတ်တမ်း တင်နိုင်သည့် စနစ်များ တည်ဆောက်လိုပါသလား၊… Read more »
Register your campaign team fora5-month hands-on Social Media Fellowship (free)
Posted January 25, 2017 by by Aung Win Htut
Myanmar & English versions below ၅လကြာ (အခမဲ့) အနီးကပ် လေ့လာနိုင်သော social media fellowship အတွက် သင့် campaign အဖွဲ့ကို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုမှာ social media က အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မှ ပါဝင်နေပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထား၊ အယူအဆတွေအပေါ်မှာလည်း လွှမ်းမိုးဆုပ်ကိုင်… Read more »
Australian Parliamentary Delegation visits Phandeeyar
Earlier in January, the Australian Parliamentary Delegation gave Phandeeyaravisit. We spoke about Myanmar’s connectivity revolution and the potential of technology to accelerate change and development in Myanmar.